USA: Xaalad degdega oo la geliyay Gobollada Qaar iyo ciidammada oo heegan ku jira | Berberanews.com
Home WARARKA USA: Xaalad degdega oo la geliyay Gobollada Qaar iyo ciidammada oo heegan...
Washingtone-(Berberanews)-Dhammaan 50-ka Gobol ee Mareykanka iyo Degmada Columbia (DC) waxay heegan ugu jiraan mudaharaadyo rabshado wata oo dhici kara dhamaadka usbuucaan, ka hor caleema-saarka Madaxweynaha la doortay Joe Biden ee Arbacada.
Ciidamada ilaalada Qaranka oo ka kala yimid daafaha dalka ayaa loo dirayaa Washington DC, si ay uga niyad jabiyaan dib u soo noqoshada rabshadihii dhimashada sababay ee dhacay 6 January.
FBI-da ayaa ka digtay suurtagalnimada socod hubaysan oo ay dhigayaan banaanbaxayaasha taageersan Trump dhamaan 50 magaalo madaxyada gobolka Xarunta Mall-ka ee ku taal magaalada DC ayaa la xidhay.
Waddooyinka xidhan waxaa ku xardhan jidgooyooyin iyadoo ammaanka aad loo adkeeyay.
Kooxda Biden waxay mar horeba ku boorisay dadka Mareykanka ah inay ka fogaadaan u safarka caasimada sababo la xidhiidha Covid-19 oo faafa, saraakiisha maxalliguna waxay yishaahdeen dadku waa inay ka daawadaan caleemo saarka meel fog.
Axadda ayaa la filayaa inay diiradda si gaar ah u saarto dibadbaxyada, ka dib qoraallo lagu daabacay taageerayaasha Trump iyo shabakadaha midigta-fog ee xagjirka ah oo loogu yeeshay mudaaharaadyo hubeysan 17-kii January.
Arrintu Waxay daba socotaa toddobaad uu Donald Trump noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee labo jeer xilka laga qaado.
Wuxuu hadda wajahayaa maxkamad Senate ah, oo lagu soo oogay “kicinta kacdoon” lala xidhiidhinayo duulaankii Capitol ee Mareykanka ee ay geysteen kooxo taageerayaashiisa ah 6dii January.
Gobolkee ayaa talaabooyin qaadaya? Gobollada dalka oo dhan waxay qaadayaan tallaabooyin taxaddar ah, laga bilaabo fuulidda daaqadaha waaweyn ilaa ay diidaan bixinta rukhsadaha isu soo baxyada.
Badhasaabyasa Maryland, New Mexico iyo Utah ayaa dhamaantood ku dhawaaqay xaalad deg deg ah kahor mudaharaadyada dhici kara.
Kalifoorniya, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Washington iyo Wisconsin ayaa ka mid ah kuwa hawlgelinaya Ilaaladooda Qaranka, Teksasna waxay xiri doontaa xarunteeda gobolka laga bilaabo Sabtida illaa maalinta caleema saarka ka dib.
Previous articleMadaxweyne Yoweri Museveni oo ku guulaystay Doorashada Uganda
Next articleTartanka ciyaaraha heerka 2aad oo laga furay Laascaanood